आनन्दमय जीवन:: Naya Nepal
देवराज इन्द्रले आफ्नो दरबारबाट भूलोकको कुनै गाउँमा हेर्दै छक्क परिरहेको देवर्षि नारदले देखे। छेउमा आएर नारदले सोधे, ‘हे देवराज, तपाईं अघिदेखि नै कहिले हाँस्नुहुन्छ, कहिले अनुहार खुम्च्याउनुहुन्छ त कहिले मुन्टो हल्लाउनुहुन्छ, के देख्नुभयो ?’
एउटै समाजभित्रका मानिसका चालामाला हेर्नुस् न, प्रत्येकको फरकफरक छ। कोही हरि–कीर्तन सुनिरहेका छन्। कोही ध्यानस्थ छन्। कोही वेद, रामायण, गीता पढिरहेका छन्। कोही बाँच्नका लागि कृषि कर्म गरिरहेका छन्। यिनीहरूका कर्म हेर्दा आनन्द आउँछ।
कोही गरिबको श्रम शोषण गरिरहेका, कोही ठगिरहेका, कोही तास खेलिरहेका, कोही झगडा गरिरहेका, कोही मातिरहेका अनि घरमा पत्नी र छोराछोरीलाई गालीगलौज र कुटपिट गरिरहेका छन्। कोही भोकभोकै छन् र घरघरमा पुगेर मागिरहेका छन्। यस्ता मानिस देख्दा नरमाइलो लाग्छ।
कतिपय बाउआमा छोराछोरीलाई माया गर्छन् तर छोराछोरी भने बाउआमासँग झर्किन्छन्। अराएको काम गर्दैनन्। बटारिएर हिँड्छन् अनि दिनभरि बरालिन्छन्। काममा पनि सघाउँदैनन्। गलत मानिसको संगत गर्दागर्दै छोरो बिग्रिसकेछ भनेर रुन्छन्। यस्तो देख्दा नरमाइलो लाग्छ। हे दवर्षि, यिनीहरूलाई भगवद् मार्गतिर मोड्ने उपाय छैन ?
हे दवराज, भूलोकका जनताको अधोगति देखेर तपाईं धेरै चिन्तित हुनुभएछ। भगवान्ले लोक हितका निम्ति उपाय पनि देखाइदिनुभएको छ। जजसले हरि–कीर्तन सुनिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन कति सुन्दर छ हेर्नुस् त ? उनीहरू शान्त स्वभावका छन्। मीठो बोली छ। हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छ। सात्विक भोजन गर्छन्। दिएर मात्र खान जानेका छन्। यिनीहरू गलत बाटोमा लागेका छन् त ?
‘छैनन्। चासो नै दिएका छैनन्’, इन्द्रले भने।
हे देवराज, अधोगतिमा लागेका र हरि–कीर्तन सुन्नेहरुको एउटै विवेक हो, केही फरक हुँदैन। हरि–कीर्तन सुन्दा आनन्दमय जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने बुझ्न सक्ने उनीहरूसँग क्षमता छ, जुन उनीहरूले उपयोग नै गरेनन्। मनुष्यले आफ्नो रक्षा आफैंले गर्नुपर्छ। आनन्दमय जीवन पाउन त आजैदेखि हरि–कीर्तन सुरु गर्नुपर्‍यो नि।
खाद्यपदार्थको गुणस्तरमा नयाँ मापदण्ड, उल्लंघन गरे ५० हजारसम्म जरिवाना
पुष्टकारी, गुँदपाक, चिउरा र दालमोठ भुजियाको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तय भएको छ । कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै तय गरेका मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
उक्त मापदण्डमा ती खाद्यवस्तुको उत्पादनदेखि प्याकेजिङ तथा लेबलिङसम्म गर्दा खाद्य नियमावली २०२७ ले तोके बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उत्पादन नभएको पाइए बढीमा पचास हजार जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो मापदण्डमा यी खाद्यवस्तु उपभोगका लागि प्याक गरिएका सबै वस्तु पर्छन् ।
अनुगमन गरी नमुना सङ्कलन गरिने
खाद्य, प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड बजारमा बिक्रीका लागि तयार गरिएका सबै पुष्टकारी, चिउरा, गुँदपाक, दालमोठ लगायतमा लागू हुने जानकारी दिए । उनले गुणस्तर मापदण्ड लागू भइसकेका खाद्यवस्तुको अनुगमन गरी नमुना सङ्कलन गरिने र सङ्कलन गरिएका नमुना सरकारले तोकेको मापदण्ड नभए कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वमा यी खाद्यवस्तु बढी खपत हुने भएकाले यसको गुणस्तर कार्यान्वयन भए वा नभएको बारे बुझ्न अनुगमन गरेर नमुना सङ्कलन गरेर गुणस्तर परीक्षण गरिने प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । मापदण्डविपरीत यी खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बजार पठाएको पाइएमा दर्ता नवीकरण खारेजीदेखि पाँच वर्ष कैद, वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ धेरै पुरानो भएकाले कारबाही र जरिवाना थोरै वा समय सान्दर्भिक नभएको धेरै गुनासो आएको र उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उक्त कानुन बनेपछि भने जरिवाना र कैद सजाय १० गुणासम्म बढी गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धकमा बिबादास्पद डिमप्रकाश पौडेल (प्रकाश)लाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निगम सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका पौडेललाई महाप्रवन्धक नियुक्त गरेको हो ।
पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि काँग्रेससँग नजिक छन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई तत्कालीन एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख भएका बेला पौडेल सदस्य थिए ।
भट्टराई शुरुमा यती समुह अन्तर्गतको हाइ अल्टिच्युट हेलिकोप्टर कम्पनीका अध्यक्ष फुर्वा ग्याजेन शेर्पा र इस्टर्न मोटर्सका कार्यकारी प्रमुख डिमप्रकाश पौडेललाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेर विवादमा परेका थिए।
पौडेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिमा ल्याइएको चर्चा शुरुमै चलेको थियो।
पौडेल नेपाली कांग्रेसनिकट पोखराका ब्यापारी आनन्दराज बतासको गाडी बिक्रेता कम्पनी इस्टर्न मोटर्स प्रालिका सीईओ हुन् ।
बतास समुहले पौडेललाई निगम संचालक समितीको सदस्य नियुक्ती हुँदा दिएको बधाई, जुन बतास समुहकै फेसबुक पेजमा राखिएको छ
भारतीय अटोमोबाइल कम्पनी आइसरको नेपालस्थित अधिकृत बिक्रेता हो, इस्टर्न मोटर्स प्रालि । बतास नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुका समेत विश्वासपात्र हुन् ।
पौडेलको कनेक्सनबाट बतासले गतबर्ष भारतले बनाइदिएको धर्मशाला होटल संचालनका लागि लिजमा लिएका छन् ।
भारत सरकारले २४ करोड अनुदानमा बनाइदिएको धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासलाई ठेक्कामा दिएपछि यो बाँदरको हातमा नरिवल साबित भएको छ  ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला १५ वर्षका लागि बतास समूहको होटेल आनन्दलाई दिएको छ । जुन ठेक्कामा लिने क्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको चाँजोपाँजो सबै प्रकाश पौडेलले नै मिलाएको स्रोतको दाबी छ । पशुपति क्षेत्र तीलगंगामा रहेको सो धर्मशाला अब तीनतारे होटेलका रूपमा सञ्चालन हुँदैछ  ।
होटेलका लागि भारतले धर्मशाला बनाइदिएको थिएन । तर पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालसहितको समूहले सर्वसाधारण तीर्थालु तथा पर्यटक सुलभ दरमा बस्न पाउन् भनेर बनाइदिएको धर्मशाला पनि ठेक्कामा दिएर दुरुपयोग गर्दै ब्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप छ ।
ब्यापारी बताससँग घुस लिएर धर्मशाला समेत होटल संचालनार्थ ठेक्कामा दिइएकोमा चर्को बिरोध हुँदैआएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने बाइडेनसँग भर्चुअल टिभी बहसमा बस्दिँन
काठमाडौं, असोज २३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनसँग भर्चुअल टिभी बहसमा भाग नलिने बताउनुभएको छ ।
ट्रम्पले फक्स बिजनेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, ‘यो व्यवस्था मलाई स्वीकार्य छैन । म व्यक्तिगत बहसमा समय खर्चन चाहन्नँ । कम्प्युटर पछाडि बसेर, हाँस्यास्पद ।’
यसको साटो बरु ¥याली गर्छु ट्रम्पले भन्नुभयो । कार्यक्रम सञ्चालकहरुले प्रतिस्पर्धी बाइडेनलाई बचाउने कोशिश गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
यसअघि बाइडेनले पनि ट्रम्प संक्रमणमुक्त भएको भरपर्दौ पुष्टि नहुँदासम्म प्रत्यक्ष टिभी बहसमा सहभागि नहुने बताउनुभएको थियो ।
ट्रम्प भने कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारपछि ह्वाइट हाउस फर्किसक्नुभएको छ ।
इतिहासकै खराब बहसमा संलग्न रहनुभएका ट्रम्प र बाइडेन कार्यक्रममै एकार्कामा गाली गलौजको शैलीमा उत्रिनु भएको थियो ।